'Nhaka' Yakakwana, Inenjodzi, Kuzvidya Mwoyo-Kukonzera Kuita Mafirimu
musha Horror Varaidzo Nhau [SXSW Ongororo] 'Nhaka' Yakakwana, Inenjodzi, Kuzvidya Mwoyo-Kunokonzera Kugadzira Mafirimu
[SXSW Ongororo] 'Nhaka' Yakakwana, Inenjodzi, Kuzvidya Mwoyo-Kunokonzera Kugadzira Mafirimu
by Trey Hilburn III March 15, 2018 997 maonero
Kubva wechipiri chaiye Hereditary inotanga, iwe unoziva kuti iwe uri mune chimwe chakasiyana. Zoom inononoka kupinda mudenga yakafanana nehupenyu imba inoshandura ichienda kuimba chaiko inozviziva pachayo, uri kudhonzwa uchienda kune chimwe chinhu chisina kuchengeteka. Iyo inoonekwa iripidhi iyo yave kuda kukukwevera iwe kuenda kune isinganzwire tsitsi, gungwa rakasviba.
Iyo nyaya inotevera mhuri yeGraham, iri kubata nekurasikirwa kuchangobva kuitika kwemhuri yemhuri. Pasina nguva mushure memariro, mhuri inotanga kuona kuti midzi yemadzitateguru avo inogona kunge iine zvisungo zvinotyisa.
Hereditary kurwisa kwakanaka kune vateereri vayo. Imba yemhuri yaGraham ndeye yakakwidziridzwa chaiyo dhora, inogara ichinzwa kilter nezvimwe fenicha ine dzakakombama urefu kana zviyero kugadzira chidimbu chidiki chekusagadzikana kwehumwe nyika iyo iri kutoshanda pane yako yekutarisa psyche. Dhizaini dhizaini inogara iri binaural pulse iyo inoridzwa panenge pese pekutanga chiitiko chemufirimu. Izvo zvinhu zviviri zviripamwe pamwechete zvatove zvichikukurudzira, zvisati zvaitika zvinhu zvinotyisa.
Chiri kunyatso rova ​​pfungwa dzangu ndechekuti uyu ndiye director, Ari Aster yekutanga ficha. Uyu mudhara anofanira kunge akararama hupenyu hwakawanda semutungamiriri akambokonzera, akatsunga mukugadzira kwake mafirimu. Hereditary kunetsekana kunetsekana kuri kukonzera kugadzirwa kwemafirimu, Aster inogadzira nzira nyowani, mbishi uye inotyisa yeiyo inotyisa mhando.
Iyo firimu inogona kuvapo zvachose semutambo wemhuri uye ingadai yainakidza. Aster anotarisira kuita kuti zvinhu zvemutambo zvishande, nepo zvishoma nezvishoma achiunza zvinokambaira kutya. Zvakawanda sekuisa datya muhari netembiricha ichikwira zvishoma nezvishoma, wave kutobikwa muhuwandu hwakawanda hwekuratidzira mifananidzo inotyisa uye mazano.
Ndiri feni yezvakawanda zveA24 zvinotyisa. Atmospheric genre mafirimu senge The Witch ndiwo mukombe wangu chaiwo wetii. Hereditary inotora mamiriro emuchadenga uye inowedzera giravhiti kwavari nekuendesa pane yakawanda yezvinotyisa vateereri kuda (hongu, kunyangwe mamwe anonyanya kushanda kusvetuka anotyisa) kugadzira iyo firimu iyo inonzwa kunge inogona kubvarura mukaha wemhepo inononoka kupisa mafeni uye zvakanyanya kutyisa vateereri. .
Mifananidzo yakatemwa mufirimu zvakanyanya inonamira mumusoro wako. Ndichiri kufunga nezvazvo izvozvi. Pane zvakawanda zvekuridza mitambo zvine hungwaru nezvekugadzira chiitiko kukusiira iwe kwete kwete chete zvakanyanyisa kukwatidzwa mifananidzo asi zvinhu zvaungade kuenda kumba nekutsvaga.
Iko kukanda mukati kwakachena hukuru. Toni Collette uye nhengo yega yega yemhuri yake vanokubata ruoko pasi nzira dzinozivikanwa, dzemhuri vasati vasiya warasika uri wega uye usina kambasi murondedzero yemhuri yerima. Kushungurudzika kwaCollette uye hunhu hukuru hunoratidzira basa zvinotyisa zvisikwa uye pasi.
"Hereditary kunetsekana kune njodzi kunokonzera kugadzira mafirimu, Aster inogadzira nzira nyowani, mbishi uye inotyisa yemhando inotyisa. ”
Hereditary chiri chakakomba chiitiko chekutyisa munzira dzese. Inoita zvimwe zvinhu zvisina kujeka nehurongwa hwekushungurudzika uye simba remhuri uye wozozvishandura nenzira inenge yakatsauka. Iyo firimu inorevesa-mweya, chinangwa chayo ndechekusvetedza iwe uye zvakanyatsoshanda pandiri. Kubva pandakagara, hapana nzira yekuti iyi firimu isagume pane yangu yepamusoro mashanu runyorwa pakupera kwegore. Iyi firimu ine njodzi uye ini handikwanise kumirira kuti ndione zvakare.